အင်းဝမြို့ဟောင်း မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီး ညောင်ရေ သွန်းလောင်းပွဲတွင် ရပ်ကွက်အသင်း ၁ဝ သင်း ပါဝ? - Yangon Media Group
အင်းဝမြို့ဟောင်း မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီး ညောင်ရေ သွန်းလောင်းပွဲတွင် ရပ်ကွက်အသင်း ၁ဝ သင်း ပါဝ?
တံတားဦး၊ ဧပြီ ၂၄
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး တံတားဦးမြို့နယ် အင်းဝမြို့ဟောင်း မဟာမြတ်မုနိ (ခေါ်)စန္ဒာမုနိမြတ်စွာဘုရားကြီး မဟာဗောဓိညောင်ပင်အား အင်းဝဟံသာဝတီအုပ်စုရပ်ကွက်များမှ ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် နှစ်စဉ် ညောင် ရေသွန်းလောင်းခဲ့ကြရာ ယခုနှစ် တွင် ရပ်ကွက် ၁ဝ ရပ်ကွက်မှ လှည့်လည်ပွဲများဖြင့် သွန်းလောင်းကြ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်းဝဟံသာဝတီအုပ်စုတွင် ရပ်ကွက် ၁၁ ရပ်ကွက်ရှိရာ ရှမ်း ဈေးရပ်ကွက်မှာ ရပ်ကွက်ငယ်ဖြစ်၍ အမျိုးသမီးငယ်များဖြင့် လှည့်လည်သွန်းလောင်းရန် အခက်အခဲရှိသဖြင့် တောင်ပလူ၊ တောင်ဈေး ကြီး၊ မြောက်ဈေးကြီး၊ ရပ်တန်း၊ ကိုင်းမား၊ ပြင်စည်တန်း၊ ယွန်တန်း၊ ပွတ်တန်း၊ ဆေးရိုးကုန်း၊ မုန့်တီစု ရပ်ကွက်ကြီးများမှ အသင်း ၁ဝ သင်းသာ ပါဝင်သွန်းလောင်းကြ မည်ဖြစ်သည်။
”အသင်း ၁ဝ သင်းစုံချိန်မှာ ရှေ့နောက်အစီအစဉ်တကျဖြစ် စေဖို့ မဲနှိုက်ကြရတယ်။ ၁ဝ နာရီမှာ ရှေ့ဆုံးကထွက်ရမယ့် မဲကျအ သင်းကရပ်ကွက်အတွင်းလှည့်လည်ဖို့ စတင်ထွက်ရတယ်။ ကျန်မဲကျ အသင်းတွေက တစ်သင်းပြီးတစ် သင်းအစီအစဉ်အလိုက် လှည့်လည် ကြရတယ်။ အုပ်စုကကျယ်တော့ လှည့်လည်ချိန်ကြာတယ်”ဟု ဟံသာဝတီအုပ်စု ရပ်တန်းမှ ကိုလှ ထွန်းဦးကပြောသည်။
ဟံသာဝတီအုပ်စုရပ်ကွက် များမှ တူညီဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားသည့်အမျိုးသမီးညောင်ရေသွန်း လောင်းမည့်သူများသည် အတီး အမှုတ်အကအဖွဲ့များနှင့်အတူ ရပ်ကွက်အတွင်းလှည့်လည်ကြပြီး မဟာမြတ်မုနိ(ခေါ်)စန္ဒာမုနိဘုရား ဝင်းအတွင်းရှိ မဟာဗောဓိညောင်ပင်၌ ညောင်ရေသွန်းလောင်းခြင်း ဖြင့် ပြီးဆုံးကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
တရားမဝင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ၁၆ ဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ တာချီလိတ်၌ ပြန်လည် လွှဲပြောင?